UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay Jowhar – HalQaran.com
Jowhar (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya, in magaaladaasi uu ka dhacay qarax geytay khasaare.
Inta la xaqiijiyay qaraxani ayaa waxaa ku dhintay hal ruux, halka ay shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya, in qaraxani uu ka dhacay boosteejada laga raaco baabuurka aada caasimadda Muqdisho.
Halka qaraxa uu ka dhacay ayaa sidoo kale la sheegay inay ka dhawaayeen guryaha ay degan yihiin mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. Waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkasi, Maxamed Caadle.
Sidoo kale, goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku yaalla maqaayad ay dad badani ay joogeen.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi uu ahaa miino.
Tags: UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay Jowhar
Somaliland oo sheegtay in saddex magaallo oo ka mid ah uu soo gaaray Fayraska Corona (COVID-19)